Golaha Wasiirada DFS oo ka dooday qorshe ku aadan dib u soo celinta hantida dowladda, gaar ahaan Warshaddihii dalka
Soomaaliya oo dooneysa in ay xubin ka noqoto Gudiga u Qaabilsan Xuquuqul Insaanka ee Qaramda Midoobay
War Saxafadeed Shirkii Golaha Wasiirada Golaha Wasiirada oo shirkoodii maanta ka dooday qodobo dhowr ah
Khamiis, March 21, 2013----Golaha Wasiiradda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta isugu yimid shirkoodii joogtada ahaa, waxaana shir guddoominayay Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Mudane Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid), iyadoo looga hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen qorshe loogu magac daray “The New Deal”, Arrimaha Amniga, iyo soo celinta hantidii dowladda gaar ahaana Warshaddihii dalka.
Wasiirka Warfaafinta, Boostada, Isgaarsiinta iyo Gaadiidka Mudane C/llaahi Ciilmooge Xirsi ayaa warbaahinta u sheegay in ugu horeyn golaha Wasiiradu warbixin ka dhegeysteen guddigii loo xilsaaray inay keenaan faah faahinta dilalkii todobaadkii hore ka dhacay Muqdisho kaasoo lagu dilay dhalinyaro, waxaana arrintan ka warbixiyay Wasiirka Arrimaha Gudaha oo ka mid ah guddigii loo xil saaray dhacdadaas.
Wasiirka ayaa sheegay in warbixinta guddiga kadib, ay Goluhu isla qaateen in dib loogu dhigo kulanka dambe ee golaha, si go’aan looga gaaro. Wasiirka Warfaafinta, ayaa sidoo kale faah faahiyay warbixin golaha Wasiirada ay ka dhegeysteen khubaro ku xeel dheer barmaamijka loogu magac daray “The New Deal”, kaas oo ah qorshe ballaaran oo ay dhaqangelinayaan dalalka deeqaha bixiya isla markaana dalalka deeqaha la siiyo ay ku dalbanayaan baahidooda gargaar, si looga taageero.
Qorshahan ayuu sheegay Wasiirka Warfaafinta in golaha wasiiradu ay soo dhoweeyeen, ayna isla garteen in hay’addaha kala duwan ee dowladdu ku dhaqmaan. Si loo helo taageero ka tarjumeysa baahida shacabka.
Sidoo kale, Wasiirka ayaa xusay in golaha Wasiirada ay ka doodeen qorshe ku aadan dib u soo celinta hantida dowladda, gaar ahaana Warshaddihii dalka, wuxuuna xusay in ay isla garteen in la magacaabo Guddi Qaran oo ku magacaaban Dikreeto madaxweyne, isla markaana leh awood ay ku fuliyaan howlahooda. Taasoo sahleysa in si dhameystiran dowladdu u hesho goobihii, iyo qalabkii Warshaddaha dalka.
Ugu dambeyntiina, Wasiirka Warfaafinta ayaa xusay in Golaha Wasiiradu ka hadleen codsiyo ay soo jeediyeen dad Soomaali ah kuwaasoo doonaya inay helaan Jinsiyadda Soomaaliga iyo weliba Baasaboor, maadaama aabayaashooda ay Talyaani ahaayeen hooyooyinkoodana Soomaali, wuxuuna xusay in dib loogu dhigay inta laga meel marinayo sharciga Jinsiyaddaha, kadibna laga gaari doono go’aan.Soomaaliya.
Soomaaliya ayaa u tartameyso in ay ka mid noqoto Gudiga Xaquuqul insaanka ee Qaramada Midoobay
Muqdisho 21 Maarso 2013
Madaxweynaha Soomaaliya oo Kulan ku saabsan Xuquuqda Aadanaha la yeeshay Khabiir ka socda Qaramada Midoobay Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Shiikh Maxamuud ayaa kusoo dhoweeyey xaruntiisa Villa Soomaaliya khabiir ka Madaxabanaan ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Xuquuqda Aadanaha Soomaaliya mudane Shamsul Baari.
Kulankan muhiimka ah ayaa Madaxweynaha iyo Khabiirku ay saxaafadda u jeediyeen shir jaraa’id oo wadajir ah.
Madaxweynaha ayaa ugu horeyntii ku bilaabay hadalkiisa Tacsi uu u diray Ehelkii iyo qoysaskii ay ka geeriyoodeen muwadiniintii ku geeriyooday qaraxii maalin hore ka dhacay magaaladda Muqdisho. Kadibna wuxuu ka hadlay arimaha ku aadan xuquuqul insaanka.
“Soomaaliya waxey dooneysaa in ay xubin ka noqoto Gudiga u Qaabilsan Xuquuqul Insaanka ee Qaramda Midoobay. Waana in aan ka noqono hormuud dhinaca Xuquuqul Insaanka. Sidoo kalena aan waafajino wax walba oo aan qabaneyno.”
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa ka go’an in uu dib u habeyn ku sameeyo, dowladda qeybaheeda kala duwan oo ay ka mid yihiin Amniga iyo Cadaaladda.
Mar-dhaw ayaa magaaladda Muqdisho waxaa ka dhici doona shir loo qaban qaabiyay sidii loogu hormarin lahaa oo dib u habeyn loogu sameyn lahaa cadaaladda iyo amniga. Waxaana ka soo qeyb geli doona quburo isugu jira Soomaali iyo ajaanib.”
Ugu danbeyntii ayaa Madaxweynuhu wuxuu yiri” waxaan idiin xaqiijinayaa , dhammaan muawaadiniinta Soomaaliyeed in muhiimadda Tiirka kowaad ee dowladda uu yahay Amniga taasna qeyb uu ka yahay xuquuqul Insaanku . Waana ay ka go’an tahay dowladda Insha Allahna waan gaari doonaa.”
Wixii faah faahin ah kala xiriir Malik Abdalla Agaasimaha Warfaafinta ee Madaxtooyadda @ media@presidency.gov.so
Faafin: SomaliTalk.com | March 22, 2013